Xiisad colaadeed oo ka taagan Kismayo & Xisbul Islam iyo Al-shabaab oo guulo sheegtay. – Radio Daljir
Xiisad colaadeed oo ka taagan Kismayo & Xisbul Islam iyo Al-shabaab oo guulo sheegtay.
Oktoobar 6, 2009 12:00 b 0
Kismayo, Oct 06 – Xiisad oo colaadeed oo aad u xooggan ayaa laga soo sheegayaa galbeedka magaalada Kismayo ee xarunta gobolka J/hoose, hlkaasi oo dhowrkii maalmood ee ugu danbeeyey ay dagaallo ka dhaceen.
Deegaannada Jannaay-Cabdalle iyo Kubbo-Kibir oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaalada Kismayo ayaa wararka ka imaanayaa waxaa ay tilmaamayaa in ay halkaasi ka taagan-tahay xaalad colaadeed oo ba?an taasi oo u dhaxaysa ururrada Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam kuwaasi oo todobaadkii la soo dhaafay ku dagaallamay magaalada Kismayo xilligaanna halkaasi ku hardamaya.
Dagaallo dad ku dhintay kuwo kalana ay ku dhaawacmeen una dhaxeeyey labadaan urur ayaa ka dhacay dhowr meelood oo ku wada yaalla galbeedka magaalada Kismyo, waxaana illaa iyo haatan aan si rasmi ah loo caddayn tirada dad ee ku dhimatay iyo midda ku dhaawacantay dagaalladaasi sababo la xiriira xagga isgaaarsiinta.
Dagaalladaan oo dhacay dhowr maalmood oo is xig-xigay ayaa lagu soo warramaya labada dhinacaba in ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana qaar ka mid ah dadka deegaannadaasi ay idaacadda Daljir u xaqiijiyeen in ay arkayeen gurmadyo ciidan ah oo labada garab ku soo daabulayeen meelaha dagaalladu ka socdaan.
Mas?uuliyiin u hadlay Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, ayaa midkasta waxaa uu sheegtay in ay ku guulaysteen dagaalladii ka dhacay deegaannada Jannaay-Cabdalle iyo Kubbo-Kibir, hase ahaatee ma jiraan warar kuwaasi ka madax-bannaan oo xaqiijinaya sida ay wax u jiraan.
Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam, waxay horay ugu dagaallameen magaalada Kismayo dabo-yaaqadii todobaadkii la soo dhaafay, iyagoo xilligaasi ku loolamayey gacan ku haynta magaalada dekedda ah ee Kismayo, waxaana ku awood roonaaday ururka Al-shabaab oo haatan maamula.
Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Somaliya oo soo jeediyey in afhayeen Sh. Adam Madoobe mudadiisii dhamaatay. [Dhegaysi …]
Wasiir ku xigeenka caafimaadka Puntland oo ka warbixiyey safar shaqo ee Boocame.